Kedu ihe bụ mmemme ihu igwe dị egwu? | Netwọk Mgbasa Ozi
na oké ihu igwe ihe Ha bụ ndị ahụ, n'ihi ike ha, na-ebute mbibi dị ukwuu na ọbụna ọnwụ. Esonyekwara ya bụ ndị na-adịghị ahụkebe ma ọ bụ ndị na-ekwesịghị ekwesị maka oge anyị nọ na ya. N'ihi okpomoku zuru uwa, a na-ekwu ha banyere karia, ka ha ga-adịwanye ike, dịka e gosipụtara na a ọmụmụ bipụtara The Guardian.
Ma gịnị kpọmkwem ka ha bụ?
1 Nchegbu ọkụ
2 Oké mmiri ozuzo ndị dị na Tropical
3 Ebili mmiri oyi
4 Ebili mmiri ọkụ
Oke kachasị nke nrụgide nrụgide nke ụmụ mmadụ nwere ike iguzogide bụ mmụba pụtara 7ºC. Uru a nwere ike ịdị elu ma ọ bụ karịa dabere na ọnọdụ gburugburu ebe obibi ha bi na ya, yabụ, onye ọ bụla amatala ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bi mgbe niile na mpaghara ebe okpomọkụ na-adị elu karịa 24ºC, o yikarịrị ka ọ bụrụ na ọ ruru 31ºC ị ga-ekpebi ịhapụ. Ọzọkwa, enwere ọtụtụ mpaghara enwere ike ịhapụ n'enweghị ebe obibi.
Oké mmiri ozuzo ndị dị na Tropical
A na-eji ajọ ifufe Tropical, nke a makwaara dị ka ajọ ifufe, ajọ ifufe ma ọ bụ oké ifufe ndị nwere ebe okpomọkụ mpaghara nke obere nsogbu, ma nwee ikuku nke ọ dịkarịa ala 120km / h. Ha kacha ebibi, na ihu igwe na-arịwanye elu, ha na-adịwanye ize ndụ. Ihe omuma atu nke a bu Hurricane Patricia, nke n’onwa iri abuo n’onwa iri abuo n’onwa iri nke abuo nke ato buru oke ikuku nke 23, ikuku ya ruru 2015km / h.
Ebili mmiri oyi
Ihe e ji mara ha bụ a ngwangwa dobe na okpomoku nke mwakpo nke otutu ikuku oyi, nke emere site na ikuku ikuku. Ha nwere ike si na narị ole na ole ruo puku kwuru puku kilomita. Nsonaazụ ya nwekwara ike bụrụ ihe na-agbawa obi: ọnwụ nke ndụ (ma mmadụ ma anụmanụ ndị ọzọ), mmebi dị ukwuu nke ihe ọkụkụ, ọ nwekwara ike ibibi paịpụ ma ọ bụrụ na edozighi ha nke ọma.
Ebili mmiri ọkụ
Okpomọkụ na-ekpo ọkụ na Europe na 2003
Okpomọkụ nke mmiri bụ oge oge okpomọkụ na-adị elu karịa ka ọ dị ogologo oge na mpaghara karịa ma ọ bụ karịa. Nsonaazụ nke ihe ịtụnanya ihu igwe dị ọtụtụ ma dịgasị iche iche, n'etiti ha anyị na-egosi: ọnwụ nke ihe ọkụkụ n'ihi oke ọkọchị, mbelata nke anụ ụlọ na mgbaàmà dịka ọrịa izugbe na ụmụ mmadụ.
Oke ihe omume ihu igwe bu oke nsogbu nke nwere ike imebi ndi mmadu ihe ojoo. Iji zere ha, ọ dị mfe ị atta ntị na ịdọ aka na ntị ihu igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ihe bụ mmemme ihu igwe dị egwu?
agba gamon dijo
ezigbo akwụkwọ dị njikere nke ahụ bụ ihe niile m na-enweghị ike ikwu karịa n'ihi na enweghị m ike iche ihe ọ bụla ọzọ: v
Zaghachi na pablo gamon